Faribohitra FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
FARIBOHITRA ETO AMIN’NY FLM ORLEANS
Araka ny fangatahan’ny Fiangonana sy ny fanapaha-kevitry ny Komity, izay nivory ny 04 mey 2014 farany teo, dia misokatra eto amin’ny FLM Orléans ny Faribohitra.
Inona ny atao hoe Faribohitra?
Fotoam-pivavahana an-tokantrano ho tohin’ny aty am-piangonana no heviny. Izany hoe mifampahery amin’ny tenin’Andriamanitra ireo mpiara-mivavaka mifanakaiky toerana ipetrahana.
Inona no kendrena amin’izany?
Ny fitomboan’ny aim-panahy eo amin’ny andavan’andron’ny Kristiana eto amin’ny FLM Orléans no kendrena. Mila fampaherezana sy tenin’Andriamanitra tokoa mantsy ny isan-tokantrano, ka fomba iray ahafahana manao izany izy.
Firy no isany eto amin’ny FLM Orléans?
Efatra (4) izy ireo, araka ny fanapahan-kevitry ny Komity tamin’ny 03/04/2016 (8 teo aloha, araka ny lamina tamin’ny jolay 2014). Voalahatra araka ny toerana ipetrahana moa izany. Ny faribohitra fahaefatra no efa nanomboka tamin’ny 2014. Ireo F1, F2, F3 dia nanomboka ny 15/05/2016.
F1: St-Marceau, Olivet ary Orléans-La-Source.
F2: Chanteau, Ormes, Orléans tampon-tanàna, Mardier, Fleury-les-Aubrais, Angerville, Pithiviers
F3: Blois, St-Laurent-Nouhan
Ahoana no ahafantarana ny faribohitra misy ahy?
Manana laharana ny Mpandray ny fanasan’ny Tompo tsirairay any anaty valopy maitso avy. Manana endrika toy izao manaraka izao izany: FLMO_001/3. Ny famaky azy dia hoe Laharana voalohany, ary ao amin’ny faribohitra fahatelo no misy ahy.
Ireo toerana ireo dia hovangian’ny Raiamandreny Pastora sy/na Katekista amin’ny fotoana mahamety izany.